phoe chit on Flipboard
13 Flips |2Magazines | 1 Follower | @phoechit2015 | Keep up with phoe chit on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “phoe chit”
Just as we’re seeing more and more 2015 Moto X leaks hit the internet, the 2014 Moto G getsaserious discount on Amazon, which isagood indication …
Assumption တက္ကသိုလ်မှ မြန်မာကျောင်းသားတဦး ၈လွှာမှ ပြုတ်ကျသေဆုံး ဧရာဝတီ၊ ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၁၅ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ Assumptionတက္ကသိုလ် စတုထ္တနှစ် IT ဘာသာတွင် သင်ကြားနေသည့် မြန်မာကျောင်းသားတဦး သူနေထိုင်ရာ Huamak Campus ကွန်ဒို A ၈လွှာမှ ယနေ့နံနက် ၃နာရီခွဲခန့် က ပြုတ်ကျ သေဆုံးကြောင်း ဘန်ကောက်ပိုစ် သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပြုတ်ကျသည့် ဒဏ်ကြောင့် ဦးခေါင်းခွံ အက်ကွဲသွားပြီး၊ လည်းပင်းရိုးကျိုးသွားကြောင်း ရေးသားထား သည်။ သေဆုံးသူသည် Assumptionတက္ကသိုလ်ရှိ ဗင်ဆင့်မာရီ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာကျောင်းတွင် တက်ရောက်သင်ကြားနေသူဟု မြန်မာကျောင်းသား အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သိရသည်။ ဓာတ်ပုံ - Sanook
Google on Wednesday announced Project Fi,anew cell phone service that will compete with AT&T, Verizon, T-Mobile and Sprint.<p>Project Fi is like any other wireless service, except forafew notable differences.<p><b>1. It works across multiple networks.</b> Google partnered with Sprint (S) and T-Mobile (TMUS) …
ဒီတပတ် မြန်မာ့မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်မှာ သတင်းမီဒီယာသမားတွေကို ဘယ်လို အကဲဖြတ်ကြပါသလဲ၊ မီဒီယာသမားနဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဘယ်လိုကွဲပြားသလဲ။ ကွယ်လွန်သူ …